Betamo Casino Dib u eegis 2021 | Casino lagu kalsoonaan karo | Voordeelcasino.com
Bogga ugu weyn » Betamo Casino
Booqasho Betamo Casino
Betamo Casino Dib u eeg 2021
In casinos online-ka ay u soo baxayaan sida boqoshaada maalmahan loogu talagalay kooxda Voordeelcasino.com wax cusub ma jiraan. Kala soocida dalabyada wanaagsan iyo kuwa xunba waa sheeko kale. Betamo casino waa mid ka mid ah casinos-yada cusub ee khadka tooska ah ee internetka ee aan si dhow u eegeyno. Khadka tooska ah ee khadka tooska ah wuxuu hoos yimaadaa dalladda N1 Interactive Ltd, sida kale PlayAmo, BOB Casino en Spinia.
Isdiiwaan geli sidii ciyaaryahan cusub Betamo
Ma qorsheyneysaa inaad isku diiwaan geliso sidii ciyaaryahan cusub? Markaa waxaad filan kartaa in roogga cas laguu soo dhejiyo. Betamo waxay aaminsan tahay in ciyaartoy kasta loola dhaqmo sidii VIP dhab ah.
Maaha wax adag in halkan la iska diiwaangeliyo. Diiwaangelin fudud ayaa si dhakhso leh u hubinaysa inaad koonto ku leedahay Betamo. Magaca, cinwaanka emaylka iyo noocyada noocaas ah. Markaad abuurto oo aad ku hubiso koontadaada emaylka, isla markiiba waad dhigi kartaa oo ciyaari kartaa. Si kastaba ha noqotee, waxaan kugula talineynaa inaad marka hore buuxiso koontadaada oo aad dirto dukumiintiyada loo baahan yahay. Haddii aad lacag badan ku guuleysato Betamo, sidoo kale tan isla markiiba waad bixin kartaa.
Waa maxay gunooyinka aad ka filan karto Betamo?
Isla marka aad lacag ku haysato koontadaada, xafladda Betamo runtii way bilaabmaysaa. Bilaw ahaan waxaad filan kartaa gunno soo dhawayn ah oo ilaa € 300 + 150 Lacag Bilaash ah. Tani waxay u qaabeysan tahay sidan soo socota:
Gunnada deposit 1aad: 100% gunno ilaa ugu badnaan € 150 + 100 Free spins on Dead or Alive 2 Afyare.
Lacagta deebaajiga 2aad: 50% gunno ilaa ugu badnaan € 150 + 50 Free Spins on it Strolling Staxx: Boosaska Fruit Cubic.
Tani horeyba waa gunno soo dhaweyn fiican, laakiin halkaas kuma joogsan. Betamo xitaa wax badan ayaa ku jira.
Abaalmarinta Abaalmarinta Jimcaha: 50% gunno ilaa ugu badnaan € 250 + 100 Free Spins oo ku taal booska Ogre.
Spins Free Spins: 100 Spins Bilaash ah On Owl Dahabka ah ee Afyare Athena
Gunno duubis sare leh: 50% marka aad dhigato wax ka badan € 2000.
Marka dhammaan gunnooyinkan waxaad ku qaban kartaa lacag badan oo dheeri ah oo lagu ciyaaro. Kaliya xusuusnow inaad marka hore u ciyaareyso gunnooyinka sida Betamo u jecel yahay. Akhriso xaaladaha gunnada ee Betamo tan.
Dalacsiin kale iyo VIP
Taasi Betamo waxay daryeeshaa ciyaartoy kasta oo cusub, taasi way cadahay hadda. Laakiin sidoo kale waxay aad uga taxaddaraan ciyaartoydii jiray. Kuwani gabi ahaanba waa la daadiyey. Jaranjarada VIP-da waxay ka tageysaa Heerka 1 (rookie) ilaa Heerka 11 (Betamo GOD). Heer kasta waxaad ka heli doontaa free Lataliyihii ama abaalmarinno lacageed oo gaaraya € 20.000. Ma ugu dambayntii waxaad tahay ciyaartoy lacag badan ku bixiya khamaarka khadka tooska ah ee internetka waxaadna taqaanaa sida loo gaadho heerka 11aad (Betamo GOD). Kadib waxaad heleysaa mid dhab ah Lamborghini Urus diray !!
Jaranjarada VIP-da dabcan wey wanaagsan tahay, laakiin Lamborgini Urus qof walba maahan. Waxa kale oo jira tartamo aad ka qayb geli karto. Waxaa loogu yeeri jiray "Lucky Spins" Betamo. Sharad kasta oo ah 0,10ct waxaad heli doontaa hal dhibic tartankan. Qiimaha tartankani ma xuma. 1500 Free Spins iyo € 1500 ayaa loo qeybin doonaa 10-ka sare. Tartankan ayaa dib loo bilaabayaa 2dii maalmoodba mar. Waxaad sidoo kale leedahay tartan bille ah. Tani waxay bixinaysaa 45.000 oo wareejin ah iyo ,45.000 XNUMX.
Ilaa € 300 oo gunno ah
Ciyaaraha iyo casino toos ah
Aynu ka bilowno khamaarka tooska ah ee Betamo. Tani dhab ahaantii waa weyn marka la barbar dhigo casinos kale online. Waxaad ka heli doontaa noocyo badan oo ka mid ah Blackjack of Roulette. Hadaanu ahayn kan aad ugu jeceshahay halkan roulette of blackjack ciyaar, meelna kama heli doontid. Intaa waxaa dheer, casino tooska ah wuxuu leeyahay ciyaaro badan oo xiiso leh: Side bet City, Monopoly Live, Lightning Dice, Raaxeeyaha Riyada, Mississippi Stud, Casino Hold'em, Joker Poker iyo wax kaloo badan.
Haddii aan eegno inta ka hartay xulashada ciyaarta, waxaad sidoo kale leedahay xulasho ballaaran oo fiidiyowyo fiidiyoow ah. Bixiyeyaasha muhiimka ah ee Betamo isticmaasho waxaa ka mid ah Big time Gaming, Netent, Microgaming, Nextgen iyo Ciyaar 'n Go. Guud ahaan waxaad ka heli doontaa 29 bixiyeyaal ciyaare kala duwan oo ka socda Betamo oo siiya tiro aad u tiro badan oo ah 2000+ fiidiyoow fiidiyoow ah.
Sidii aan horeyba ugu bilawnay dib-u-eegidgan, Betamo waxay hoos tagtaa dalladda weyn ee N1 Interactive. Shirkadani waxay leedahay dhowr casinos oo khadka tooska ah ah, sida Mason Slots, iyo taas waxay sidoo kale leeyihiin waayo-aragnimo badan oo ay la leeyihiin ciyaartoy casho oo kala duwan oo dalal kala duwan ka yimid Betamo waxay ruqsad ka haysataa Malta, oo aadan ku heli karin xirmo subag, waxayna in badan maalgashi ku sameysay khamaar masuul ah Sidan ayaad u dejin kartaa xadka ciyaaraha marka la eego deebaajigaingen ama waqtigeeda. Waxaad sidoo kale 'ka saari kartaa' naftaada mudo cayiman ama aan xadidnayn oo waqti ah. Waad fahantay in Betamo doorbidi laheyd inaysan sidan helin, laakiin waxay muujineysaa in Betamo ay si dhab ah ula socoto la xisaabtanka khamaarka internetka.
Si kastaba ha noqotee, waxaad had iyo jeer ku jirtaa hal aaminay jawiga SSL meesha xogtaada, wareejinta bangigaaguingen oo lacagtaadu had iyo jeer waa ammaan oo ammaan ah.
Cabashooyinka ku saabsan Betamo
Si ka duwan casinos-yada kale ee internetka, wax yar ama waxba lagama heli karo Betamo. Dabcan tani waxay la xiriirtaa xaqiiqda ah in Betamo ay dhowaan bilaabatay oo aysan weli hayn xog badanbase waa inuu ubaahanyahay ciyaartoyda casino. Dhinaca kale, waxaan inta badan qornaa dib u eegis ku saabsan casinos-ka khadka tooska ah laga bilaabo ee dhowaan billowday wax badanna laga heli karo tan. Inta badan cabashooyinka aan helno waxay u badan yihiin lacag-bixiningen. Kuwani badanaa waxaa lagu hayaa bilowga. Sababta tani waa mid fudud; koontadaadu wali (ma) dhameystirna. Betamo waa qasab in la soo gudbiyo dukumiintiyada. Hubintaani haddii aad ku ciyaarayso magacaaga waana ku qasab dhammaan rukhsadaha ka socda Malta ama UK. Tani waxay ugu yeeraan nidaamka KYC. KYC waxay u taagan tahay Baro Macaamiilkaaga.
Isla marka aad rabto inaad ku ciyaarto lacag dhab ah Betamo, waxaad leedahay xulasho ballaaran oo ah sida aad rabto inaad lacagtaada ugu dhigato koontadaada. Xaqiiq madadaalo ah; at Betamo waxaad si fudud ugu shubi kartaa koontadaada iDeal. Haddii aadan isticmaalin, waxaad ka heli doontaa liiska xulashooyinka lacag bixinta ee hoose.
Waxaad ku bixin kartaa adoo adeegsanaya xulashooyin yar oo yar, laakiin wali liis badan oo xulashooyin ah.
Intii lagu guda jiray baaritaanada qamaarkaan, waxaan ogaanay in Betamo ay tahay casino lagu kalsoonaan karo oo khadka tooska ah lagu ciyaaro. Waxay leedahay kala duwan oo cajiib ah oo kulan, taas oo u fududeyneysa ciyaaryahan kasta oo casino online ah. Xaqiiqda xiisaha leh ee ku saabsan Betamo waa barnaamijka VIP ee aad ugu ciyaarto abaalmarinno lacageed oo waaweyn iyo xitaa Lamborghini Urus!
In ka badan Betamo Casino
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan Betamo
Miyaan ku ciyaari karaa kalsooni iyo ammaan Betamo?
Betamo waxay ruqsad ka haysataa Malta waxayna isticmaashaa RNG (Random Number Generator). Taas macnaheedu waxa weeye in Betamo ay tahay casaan toosan oo lagu kalsoonaan karo.
Ciyaar noocee ah ayaan ka ciyaari karaa Betamo?
Betamo waxay leedahay ciyaaro badan oo kaladuwan oo ay kujiraan casino toos ah, fiidiyoow fiidiyoow ah iyo boosas kala duwan oo Ghanna ah. Akhriso dib-u-eegistayada bixiyeyaasha iyo cayaaraha ay si sax ah u leeyihiin.
Sideen lacag ugu dhigi karaa Betamo?
Lacag dhigashada Betamo way fududahay oo dhakhso badan tahay. Habka ugu caansan waa iyada oo loo marayo iDeal. Waxaad sidoo kale lacag ku shubi kartaa adoo maraya Trustly, Neteller ama Visa. Dhammaan xulashooyinka dhigaalka; akhri dib u eegistayada.
Maxay yihiin xayaysiisyada ka socda Betamo bisha Maarso 2021?
Bishii Maarso 2021, Betamo waxay leedahay dallacsiinno dhowr ah, laakiin tan ugu xiisaha badan ayaa ah inaad ka ciyaari karto / keydin karto Lamborghini Urus kuu gaar ah! Fiiri dib-u-eegistayada si aad u ogaato sida saxda ah ee tani u shaqeyso!
Midkani Betamo Casino dib u eegista waxaa qoray Nicky waxaana markii ugu dambeysay la baaray 02-03-2021.